‘सोचाइ र भोगाइमा फरक रहेछ कला क्षेत्र’ « Drishti News – Nepalese News Portal
‘सोचाइ र भोगाइमा फरक रहेछ कला क्षेत्र’
१६ आश्विन २०७८, शनिबार 12:00 pm
सलक्क ज्यान, गहुँगोरो र उचाई पाँच फिट ७ इन्च । मोडल युरिका लामाको बाहिरी हुलिया हो यो । मोडलिङ वा कलाकारितामा खुलापन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छिन् उनी । मानौँ, उनी हलिउड र बलिउडबाट प्रभावित छिन् । चार वर्षदेखि मोडलिङमा रमाउँदै आएकी २१ वर्षीया युरिकालाई ‘विकिनी गर्ल’ भन्दा आपत्ति छैन । उनी भन्छिन्, ‘मेरो लागि विकिनी एक्सपोज ठूलो कुरा होइन । पहिलो फिल्ममै विकिनी एक्पोज गरेर चर्चामा आएकी हुन् उनी । दाङमा जन्मिएकी युरिका भन्छिन्, ‘थाहा छैन, विकिनीसुटमै किन बढी अफर आउँछ ?’ तीन दर्जनको हाराहारीमा र्याम्प शो गरिसकेकी युरिका अभिनीत ‘सन्नी सन्नी’ गीतको भिडियो हालै सार्वजनिक भएको छ, जसमा उनी ‘स्वीमसुट’मा देखिएकी छन् । ‘मिस प्लस–२’मा पार्टिसिपेन्ट भएपछि मोडलिङ ‘करिअर’ सुरु गरेकी मोडल युरिका लामासँग एमपी सुब्बाको जम्काभेट :
सानो हुँदा गीत बजेको सुन्नेवित्तिकै ऐना हेरेर नाच्न थाल्थेँ । त्यतिखेर कसरी त्यो रहर जाग्यो थाहा छैन । बुझ्ने भएपछि मोडल बन्ने इच्छा बढ्दैगयो । त्यही इच्छा र रुचीका कारण फेसन टिभी बढी हेर्थे । फेसबुक पेजहरु सर्च गरेर हेर्थेँ । त्यहीक्रममा ‘मिस प्लस–२’मा सहभागी भएँ । ‘मिस प्लस-२’ सेकेण्ड रनरअप भएपछि मोडलिङ करिअर सुरु गरेकी हुँ ।
म्युजिक भिडियोमा आउनुअघि र्याम्प मोडलिङ गर्नुहुन्थ्यो ?
हो, अहिले पनि र्याम्प मोडलिङलाई निरन्तरता दिइनै रहेकी छु । म्युजिक भिडियोमा आएकोचाहिँ तीन वर्षमात्र हुँदैछ । यस अवधिमा धेरै म्युजिक भिडियो गरेकी छैन । म्युजिक भिडियोमा काम गर्ने सोच भएरपनि सोचेको जस्तो नभएपछि गरिनँ ।
अहिलेसम्म कहाँ कहाँ र्याम्प शो गर्नुभयो ?
काठमाडौं, पोखरा, धनगढीलगायतका सहरमा २० भन्दा बढी र्याम्प शो गरिसकेकी छु । सबैभन्दा ठूलो र्याम्प शो हालै होटल सोल्टीमा ज्वलरीको गरेकी थिएँ ।
तपाइँको प्राथमिकता र्याम्प कि म्युजिक भिडियो ?
र्याम्पबाट आएकी भएपनि अहिले म्युजिक भिडियो र फिल्मी अभिनयलाई प्राथमिकता दिएकी छु । र्याम्प शोलाई साइडमा राखेकी छु ।
यो क्षेत्र सोचाई र भोगाइमा धेरै फरक रहेछ । मलाई लाग्थ्यो, आफूमा ट्यालेन्ट भएर राम्रो पर्फमेन्स गर्न सकियो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर, त्यस्तो नहुने रहेछ । यो क्षेत्रमा कम्प्रमाइज गर्न सक्नेहरु मात्र अगाडि बढ्ने रहेछन् । यो चार वर्षमा म अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण पनि यही हो कि म कम्प्रमाइज गर्दिनँ । म सँग ट्यालेन्ट नभएको भए छुट्टै हुन्थ्यो । तर, मसित प्रतिभा र कला छ, त्यसैले ‘कम्प्रमाइज’ गर्दिन ।
एक पटक आएको थियो । लगानी गरेर मोडल बनाएपछि निर्माता/निर्देशकले ‘कम्प्रमाइज’ गरौँ भने । मैले ‘कम्प्रमाइज’ नमान्दा सुटिङ भइसकेको भिडियो समेत रिलिज गरिएन । तर, दुःख लागेको छैन किनकि, शरीर बेचेर होइन, कला बेचेर आफूलाई अगाडि बढाउनु भन्ने मैले सिकेकी छु ।
तपाइँका लागि फिल्म बन्नुपर्यो भने कस्तो हुनुपर्छ ?